The Gardener: 2008
ငယ်တုန်းက ကြားဖူးတဲ့ ဟာသလေးပါ ...။
... ငါသေရင် .. ငါ့ အဘိုးလို အေးအေးချမ်းချမ်း သက်တောင့်သက်သာလေး သေသွားချင်တယ် ...။
အဘိုးမောင်းလာတဲ့ ကားပေါ်က လူတွေလို ... အော်ဟစ်ကြောက်လန့်ပြီး မသေချင်ဘူးတဲ့ ... ။
စိတ်ချမ်းသာမှုတော်တော်များများဟာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ချမ်းသာမှု အများဆုံးဟာ ဆက်ဆံရေးတွေ အဆင်ပြေလို့ ၊ ကိုယ် ၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ်လေးတွေ လုပ်နေရလို့၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် သိပြီးတော့ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေတတ်လို့ စိတ်ချမ်းသာတာပါ .... ။ ။
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတုန်းက .. ဆရာအောင်ဝေးက ဘီလူးကျွန်းမှာ စာပေဟောပြောပွဲလုပ်သေးတယ်ဗျ ... အဲဒီ အခွေလေးကို နားထောင်လိုက်ရတယ် အဲဒီဟောပြောပွဲမှာ ဆရာအောင်ဝေးက Frost ရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်... သိပ်ကောင်းတယ် ... Robert Frost ရဲ့ကဗျာလည်း အဲဒီကတည်းက သဘောကျတယ် ... ဆရာမဂျူးကလည်း ... သူ့ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားသွားခါနီးမှာ ... ဒီကဗျာရွတ်ပြသွားသေးတယ် ... နောက်ပြီး အဲဒီကဗျာက Family Album မှာတောင်ပါသေးတယ် ...။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကဗျာဆိုတော့ Wiki မှာရှာပြီး...ဖတ်ကြည့်တော့ ... Frost က ကဗျာရှည်ကြီးတစ်ပုဒ် "New Hampshire" ကို တစ်ညလုံး ခက်ခက်ခဲခဲရေးပြီး မနက် အပြင်ခဏထွက်တုန်း ... ဒီ Stopping by Woods onaSnowy Evening ကဗျာရေးဖို့ idea ရသွားတယ်လို့တွေ့ရတယ် ...။
Frost ရေ ... သွားချင်တဲ့ အချိန်မှာ ... သွားလို့ မရသေး ....
သွားလို့ရတဲ့ အချိန်ကျတော့ ... ကိုယ်လိုချင်တာတွေက ကိုယ့်ကို ဆွဲထားဦးမှာလား ....
အဲဒီ အချိန်ကြမှ ... ငါ မပြတ်မသားထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ... ငါ့ကို ဒီကဗျာလေးရွတ်ပြပါဦးနော် ... ။
ကိုယ့်ကျေးရွာက အိမ်ငယ်လေးကို ငေးကြည့်ရုံလေးပါပဲ ...။
တွေးလိုက်တဲ့ အတွေးတွေတိုင်းအတွက် ငါတို့ ရလဒ်တစ်ခုစီ အမြဲရနေတာကို ငါဘာလို့မေ့သွားတာလဲ ...။
လှပနက်ရှိုင်းသိပ်သည်း ... ဒီ တောအုပ်လေးကို ငါရောက်လာခဲ့မယ် ....
အခုတော့ ငါ့မှာထိန်းသိမ်းထားရမယ့် ကတိတွေနဲ့ ... ...
စနစ်တကျ အချိန်ဖြုန်းခြင်းကို တတ်မြောက်လာတဲ့တစ်နေ့မှာ ... ငါပြန်လာမှာပါ ...။
တောင်တန်းက စိမ်းလန်းစွာ ...
စိမ့်စမ်းက ကြည်လင်စွာ ...
အဲဒီမှာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး ....
ငါကလည်း ဘာမှမရှိခြင်းတွေကို သိမ်းဆည်းဖို့ပြန်လာမယ် ...။
မိုင်ပေါင်းများစွာ ... ငါသွားရဦးမယ် ...
ဒီနေ့ .... လမ်းဖြတ်ကူးတုန်းက ...။
မီးက စိမ်းနေပြီ ...။
ကိုယ့်မှာက CARE ကို စောင့်နေရသေးတယ် ...
စာတမ်းကလည်း cross with CARE ဆိုတာကိုး ..။
CARE ကို မတွေ့တာနဲ့ပဲ လမ်းမကူးလိုက်ရဘူး ....။
ပင်နယ်တီကို save တာလား၊ free kick ကို save တာလားလို့မေးတော့ .... သူတို့က မသိကြဘူးတဲ့...
ဒါနဲ့များ ... Jesus Saves တဲ့...။
High-way to Heaven ... တဲ့....
အမှန်က က High-way to Hell via Heaven ... ဖြစ်သင့်တယ်ထင်တာပဲ....။
ခေတ်သစ်မင်းသုံးပါး (မူကွဲ ပညာရှိသုံးဦး)
Jesus ကို အရှာထွက်ဖို့ ဂျေရူဆလမ်ကို လက်မှတ်ဖြတ်လိုက်ပြီ ...
တစ်ယောက်က လော်ဗန်အစား အမွေးတိုင်တစ်ထုပ်ဝယ်သွားတယ်...
တစ်ယောက်က မီရာ အစား ... နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ visiting card ယူသွားတယ် ...
တစ်ယောက်က ရွှေအစား .. ကလေးကစားစရာ သရဖူလေးတစ်ခု ယူသွားတယ် ...။
သိုးကျောင်းသားတွေက ..ခုနှစ် ..။
ကြယ်ကိုတွေ့နေပြီ တဲ့... နေ့ရက် ။
ကောင်းကင်တမန်တွေ သီချင်းဆိုခါနီး ...နာရီ...။
Sweet December ...
ကဲ .. လာပါပြီ စန်တာကလော့စ် ...
Financial Crisis တွေထွက်လာတယ် ...
O LORD, O GOD WHY HAD YOU FORSAKEN ME လို့ အော်မလို့ပဲ ...
ခက်တာက Jesus က သူ့စကားတွေကို register လုပ်သွားတယ် ...
ဒေါသထွက်တာနဲ့ ... စန်တာကလော့စ်ကို ... ကတုံးတုံးပေးလိုက်တယ် ....။
အသက်ကို ပါးစပ်နဲ့ရှူနေတယ် ...
သူ့ရက်စွဲတွေကို သေချာ ရေနေတွက်နေတာနဲ့ ....
အရူးတစ်ယောက်က စာရွက်နဲ့ ဖြန်းခနဲ ရိုက်လိုက်တယ် ...
သူ့ကို ကျော်တက်သွားလို့ .... စိတ်တိုတယ်တဲ့ ... ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်
သူတောင်းစားတစ်ယောက်က ရုပ်တည် နဲ့ ...
ပိုက်ဆံပေးဆိုတဲ့ပုံစံလုပ်ပြတယ် ... ပေးလိုက်ရတယ် ...
အဲဒီနှစ်မျိုးပေါင်းထားတာနဲ့ တူသလို ဆင်သလို ရှိတဲ့ ... ကံကြမ္မာကိုတော့ ..
ကိုယ်က ဒီဇင်ဘာလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ် ....
ဘယ်တော့မှထပ်မထုတ်ကြည့်တော့မယ့် အိပ်မက် အသေတွေပဲပေါ့ ...
ဒီလိုနဲ့ပဲ ပြုံးမိသွားတယ် ...။ ။
ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ...
Self perfection is culture .
မိမိကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားတာဟာ ယဉ်ကျေးမှုပါ ။
ငါ့ရဲ့ ပြတင်းပေါက်လေးကို ပိတ်ပြီး ...
ဆောင်းရာသီလို တိတ်နေလိုက်တယ် ....။
Forwarded ... Message...
သံဝေဂ ရစရာကောင်းတဲ့ forward images တွေပါ ....။
ငါတို့ဟာ သေးငယ်တဲ့ ဖုန်မှုန့် ... ဒါပေမယ့် ...မာနကတော့ ကြီးတယ် ...။
အဝေးကိုမြင်နိုင်တဲ့တစ်နေ့မှာ ... ငါတို့ အမြင်မှန် ရလောက်ပါရဲ့ ...
အချိန်သိပ်မနှောင်းသွားဖို့ပဲ မျှော်လင့်မိတယ် ...။
Funny Forwarded Pictures ...
For my lovely friends including you .....